Waterjet ကိုအသုံးပြုသောအခါမည်သည့်ရှုထောင့်များကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သနည်း? - Foshan HaiRan Waterjet Cutting Technologies Co. , Ltd
နေအိမ် » Waterjet ကိုအသုံးပြုသောအခါမည်သည့်ရှုထောင့်များကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သနည်း?
Waterjet သည်ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်မကြာခဏအသုံးပြုသောကိရိယာဖြစ်သည်. အဆိုပါ waterjet သုံးပြီးပြီးနောက်, ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေးသည်အကောင်းဆုံးဖြတ်တောက်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိနိုင်သည်. သို့သော်, အဆိုပါလိုအပ်ချက်တင်းကျပ်သောလည်ပတ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာရန်ဖြစ်ပါသည်.
နောက်ထပ် waterjet အတွက်သဲ nozzle ၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတိုးတက်စေရန်, တံဆိပ်ခတ်သေချာစေရန်လိုအပ်သည်. နေသမျှကာလပတ်လုံးသင် waterjet ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဖောင်းကြွအစိတ်အပိုင်းများကိုထိရန်သင်နှစ် ဦး စလုံးလက်ကိုသုံးနေသမျှကာလပတ်လုံး, ဒါကြောင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပါတယ်. ယေဘူယျအားဖြင့်, မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်အတူအဆုံးအပေါ်တံဆိပ်ခတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမလုံလောက်ပါလိမ့်မယ်.
အဆိုပါ waterjet ၏အသုံးပြုမှုစဉ်အတွင်း, ပိုက်လိုင်းချိတ်ဆက်မှုကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်. ရေယိုစိမ့်မှုဖြစ်စဉ်ကိုကာကွယ်ရန်, ပိုက်၏ခေါင်းပေါ်မှာချည်ဝက်အူ pad ပါထက်ပိုသုံးကြိမ်ပိုမိုမြင့်မားနိုင်ပါတယ်, ဖြတ်တောက်ခြင်းထိရောက်မှုကိုထိခိုက်ခံရခြင်းမှကာကွယ်ရန်. ဖြည့်စွက်ကာ, ဓါးပေါ်တွင်ပြတ်ရွေ့၏ပြဌာန်းခွင့်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါသည်, အထူးသဖြင့်ရေသို့မဟုတ်ရေနံဆီသို့ရောက်သောအခါ.
အမှားကိုမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်၎င်းကိုအချိန်မီဖြေရှင်းရန်သာအထောက်အကူပြုသည်, ဒါပေမယ့်လည်း waterjet ၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်.